I-BIME: Isoftware Njengobuhlakani Bebhizinisi Lensizakalo | Martech Zone
NgoLwesine, Februwari 7, 2013 NgoLwesithathu, Februwari 6, 2013 Douglas Karr
Njengoba inani lemithombo yedatha liqhubeka nokukhula, kwezamabhizinisi (BI) uhlelo luyanda (futhi). Izinhlelo zezobuhlakani bebhizinisi zikuvumela ukuthi uthuthukise ukubika namadeshibhodi kumininingwane kuyo yonke imithombo oxhumeke kuyo. IBIME iyi-Software as a Service (SaaS) Business Intelligence system ekuvumela ukuthi uxhume kuzo zombili i-inthanethi nezwe elisendaweni eyodwa endaweni efanayo. Dala ukuxhumana kuyo yonke imithombo yakho yedatha, dala futhi wenze imibuzo futhi ubuke amadeshobhodi wakho kalula - konke ngaphakathi kwesikhombimsebenzisi esibonakalayo esihle se-BIME.
I-BIME ingasebenza "njengomfundi obukhoma", isebenza kude futhi ngesikhathi sangempela. Noma kunjalo, akudingi ukuthi ubambe idatha yakho efwini. Noma kunjalo, lokhu kukhetha kunezinzuzo eziningi: finyelela idatha yakho nganoma isiphi isikhathi noma kuphi. Ngokuya ngosayizi wedatha, ungalayisha idatha yakho ngaphandle komthungo ku-Déjà Vu, BimeDB noma I-Google BigQuery.
Nge-BIME unokucaca futhi ungaguquguquki imodeli yombuzo kuyo yonke idatha yakho. Beka "izinto" ofuna ukuzihlaziya ngemigqa namakholomu futhi usuqedile. Bese uyihlunge noma usike. Qoqa izinto ngamandla, zihlunge ngokususelwa kwimithetho eyinkimbinkimbi noma ulinganise umthelela wenguquko kwezinye izinombolo zakho.
Nge-BIME ungakha ukubonwa okusebenzisanayo lokho kuzogqamisa ukuthambekela namaphethini afihlwe kudatha yakho. Ungazibumba ngokuhlunga uchungechunge noma ngokuveza idatha engaphansi. Konke kuklanyelwe ukukhombisa imininingwane eningi kunani lesikhala esincane. Ungasizakala ngombala nosayizi wokufaka ikhodi ngokwesibonelo, noma udlale ngezinhlobo eziningi zezinketho zokwenza ishadi ngokwezifiso.
Qhathanisa eyakho web analytics idatha nehhovisi lakho langemuva, linganisa umkhankaso wakho wangempela we-ROI ngokuqhathaniswa nesabelomali sakho sespredishithi. Konke kudeshibhodi eyodwa. Usebenzisa izimfanelo nezilinganiso ze-BIME ezibaliwe, okuguquguqukayo komhlaba wonke, amaqembu, amasethi namanye amalungu abaliwe ungabheka idatha yakho kunoma iyiphi i-angle.
Vula amandla wolwazi oluhlanganisiwe nge UmbuzoBlender. Abasebenzisi bangabuza imithombo eminingi futhi bayenze ibe nomqondo ngayo - ngaphandle kolimi lombuzo, amafayili, namafomethi wemethadatha. I-QueryBlender ivumela abasebenzisi ukuthi bahlanganise futhi bafanise noma yiluphi ulwazi, kusuka kuma-spreadsheet wefa kanye nemininingwane emikhulu yobudlelwano ukuze kusakazwe idatha kusuka ku-Google Analytics, Google Apps, salesforce.com, noma i-Amazon Web Services.
Qoqa izinto ngamandla, zihlunge ngokususelwa kwimithetho eyinkimbinkimbi noma ulinganise umthelela wenguquko kwezinye izinombolo zakho. Ama-BIME injini yokubala inakho konke okudingayo, nokuningi. Ungesabi ukubhala ikhodi; sinokuxhumana okuhle komsebenzisi kokwenza izibalo ezivame kakhulu. Izinketho ze-Post-processing zizokongela amahora futhi zikuvumele ukuthi uzuze izibalo ezivamile ngaphandle kokubhala ifomula eyodwa.
Njalo IBIME ilayisense iqala ngamadeshibhodi angama-20, ukuxhumana kwedatha okuyi-10, umklami ongu-1 nababukeli bedeshibhodi abangenamkhawulo.
Tags: Ama-Web Web ServicesIBigQueryI-BimeDBkwezamabhizinisiUDejà VuI-google analyticsizinhlelo zokusebenza ze-googleI-Google BigQuerysalesforce.com
Umbiko we-B2012B Marketing Benchmark Report ka-2